Ungusomabhizinisi nomholi olwela ukuthi abantu abamnyama bangashiywa ngaphandle. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Nokho loku akumvimbanga ukuthi aqhubeke nokulwela abantu abamnyama. Namhlanje le mpi useyibambe ezinhlakeni zamabhizinisi.
UMnu u-Elias Monage, oneminyaka ewu-56, usanda kuqokwa wangumengameli omusha wenhlangano yosomabhizinisi abamnyama iBlack Business Council (iBBC).
UMonage, uwusihlalo we-Arabela Holdings nesikhulu esiphezulu se-Afika Group, izinkampani azisungula yena. I-Arabela Holdings ilekelela ezinye izinkampani zigcine izimfanelo ezidingekayo ukuze zisebenze, phecelezi i-compliance. Inophiko elibheka amathuba lapho ingatshala khona. I-Afika Group yona igxile embonini yokusansimbi kanti kunezinkampani eziningi ezincane ezikule mboni esiyazithenga yazihlanganisa.
Iphinde ikhiqize izigubhu ezivikela izigxobo zikagesi nokugwema ukudonsa izi“nyokanyoka”, ugesi womkokotelo. Ikhiqiza nemishini eyidayisela izimayini nemboni yezokwakha.
UMonage ozalelwe futhi wakhulela eKatlehong, eGauteng, usebenze ezinyunyaneni ngaphambi kokusungula amabhizinisi. “Ngaba womunye wabasunguli beMetal and Allied Workers’ Union, okwathi ngokuhamba kwesikhathi yahlangana nezinye izinyunyana kwabunjwa iNumsa ngo-1987.
“Ngigcine sengihola izingxoxo zamaholo ezisebenzi kanti lapho kunezivumelwano ezimqoka esazisayina,” kukhumbula uMonage ngeqholo.
Usebenze nezinyunyana iminyaka ewu-12 ngaphambi kokuyoqala ukuzisebenza njengoba ethi lalingasekho elinye ithuba lokukhula.
Uthi: “Ngangingomunye wezingcithabuthopho ezaqhamuka (neziphakamiso) ezenza ukuthi kube nokuzinza embonini njengokuthi isivumelwano samaholo sibe yiminyaka emithathu. Yithina futhi esathi uma inkampani kukhona izinguquko ezenzayo azenzeke lezo zinguquko ngokubandakanya nezisebenzi. Sathi akukho eningathi nikwenzela thina ngaphandle kokusifaka nathi.”
Inkampani yakhe yokuqala eyayilekelela izinkampani ukuthi zigcine imithetho nezinto ezithinta ukuholela izisebenzi, i-payroll system, yagcina isihlangene nezinye. Basungula inkampani enkulu eyayenza lo msebenzi okwakuthiwa yiKelly Group, eyagcina isihweba eJSE.
Wathi qu embonini yokuhlinzeka ngezimali lapho ayesebenza khona ngezinkampani ezazinenkinga yemali, zingasakwazi ukukhokha izikweletu, phecelezi i-insolvency, ngenkathi esebenza eDeloitte.
UMonage uthi ukuhlangana nokusebenzisana kwakhe nezinkampani eziningi yinto eyenzeka ngenxa yokubona amathuba amasha nokuhlale eqhamuka nezinto ezintsha. Uthi lokhu kumqoka uma ungusomabhizinisi.
Elinye lamathuba alibona, nokuyinkampani esekhona namanje, wukuxakeka kwabantu ngenxa kokubiza komshwalense wezempilo, i-medica aid. Basungula inkampani uMvuzo Medical Aid, inkampani ehlinzeka ngalo mshwalense embonini yezimayini, okusansimbi nezitolo, i-retail. Le nkampani yaba ngenye yezokuqala ezethula osekujwayelekile kule mboni ukuthi kube neqoqo lodokotela okusetshenzwa nabo, i-network
“Akulula ukuzisebenza. Awukwazi ukuhlale uthola imali oyidingayo noma yikanjani kanti nokuthola amakhasimende akuyona into elula kodwa kuyadinga ukuthi uhlale uqhamuka nezinto ezintsha, izindlela ezihlukile zokwenza izinto, ubekezele futhi ubambisane nezinkampani ezinkulu,” kululeka uMonage.
Uneminyaka ewu-11 ehlala ebhodini yeBBC. Ithimba ahola nalo yiphini likamengameli uMnu uGregory Mofokeng, elinye iphini likamengameli uNksz uYvonne Maitin, inhloko yemigomo uMnu uTilson Manyoni nomgcinimafa-jikelele uNksz uTsakani Nkambule.
Abaholi beBBC banezinto ezine abazibeke eqhulwini ngesikhathi sabo
Zine izinto abafisa zifezeke ngaphambi kokuphela kwesikhathi sabo. Okokuqala, wukubona umnyakazo ocacile ngohlelo i-Black Industrialist Programme, athi akusizi ukugqugquzela abantu ukuthi bangene ezimbonini ezinkulu kodwa ungabaseki ngemali efanele nokuthi bathole amakhasimende.
“Uma ubuka imali i-IDC (i-Industrial Development Corporation) exhasana ngayo, (inzalo) yayo Ibiza idlula eyamabhange azimele. Kumele kube nezindlela ezingcono zokuxhasa abantu ngemali,” kusho uMonage.
Okwesibili, bafuna ukubona into ecacile ngesibophezelo esenziwa wumengameli wezwe sokuthi abantu besifazane abamnyama kumele bathole u-40% womsebenzi.
Okwesithathu, bangathanda ukubona uhlelo lokuvuselela umnotho lwenziwa kangcono kunendlela oluqhubekayo ngayo manje.
Okwesine, bafisa kube nendlela esiza wonke umuntu yokubambisana phakathi kwezinkampani ezinkulu nezincane. “IsiZulu sithi izandla ziyagezana. Izinkampani zabantu abamnyama azikwazi ukuhlala ziyizinkampani ezincane unomphelo.”
Uma ebheka emuva uthe kuyamthokozisa ukuthi: “Angikaze ngidideke ngokuthi yini engiphokophele kuyona futhi angikaze ngibe wumuntu ofisa ukuthatha izindlela ezinqamulelayo. Uma uwusomabhizinisi ufana nomlimi, kumele ugxile kokwenzayo. Kukhona izinto ozozenza mhlawumbe unyaka wonke kodwa ekugcineni kungalungi bese kufanele uqale phansi,” kuphetha yena.
Uneziqu ze-Insolvency Law zaseRau (esibizwa nge-University of Johannesburg);
Wenza i-Programme in Telecommunication Regulation, Policy and Management eWits University;
Une-Executive Coaching yase-University of Carlifonia, eMelika;
Uhlala kwiBrics Business Council;
Uwumengameli weSteel and Engineering Industries Federation of Southern Africa;
Uganiwe kanti unabantwana abahlanu;
Uphumula ngokuvakasha, ikakhulukazi lapho kunezilwane zasendle khona;
Ukhonze umculo i-fusion, i-jazz ne-RnB. Abanye babaculi abakhonzile wuHugh Masekela, uKirk Whalum, uSelaelo Selota, uSello Kgalane, uJimmy Smith no-Andreas Vollenweider;
Uwumlandeli we-Orlando Pirates neBarcelona;
Ukhonze izincwadi ezikhuluma ngepolitiki namabhizinisi. Enye yezincwadi azithandayo ngethi The Writing is on the Wall kaWill Hutton;
Ukhonze i-salmon namavegi;